Abavelisi beBhulukhwe yomnqamlezo - China abavelisi beengxowa zeFektri, abaxhasi
Ibhegi crossbody TGN1001
I-TIGERNU kwizinga eliphezulu lokwenziwa kwesikhumba somntu
Ubungakanani bengxowa yi-20 * 19 * 20cm, enegumbi elinye kunye neepokotho ezimbini ezingaphambili, inendawo eyoneleyo kwiimfuno zakho zemihla ngemihla, njengefowuni, ibhanki yamandla, iibhotile zamanzi njl.
Izinto ezisetyenzisiweyo sisikhumba sophahla oluphezulu, sithambile kakhulu kwaye siyakhazimla kwaye siyomelela ukusebenzisa. Iiziphu ziyi-proof-proof kwaye zilula ukuyisebenzisa.
Le bhegi inokusetyenziswa njengesixhobo sokulingisa kwisingxobo esifanayo. Ukhetho olufanelekileyo kubomi bakho bemihla ngemihla, uyokuthenga, ezemidlalo, umsebenzi, isipho somntu omthandayo.
Ingxowa ye-Crossbody Bag T-L5105
Ingxowa enkulu yomthunywa weTIGERNU
Umthamo: le bling sling size 21 * 6 * 24cm (L * W * H), inegumbi eliphambili elinephedi yokutshixa ithebhulethi elungele i-iPad ukuya kuthi ga kwi-9.7inch.Kwakhona kunendawo eyaneleyo kwiigiya zakho zemihla ngemihla, isipaji, incwadi yokubhalela, ibhanki yamandla njl. Iipokotho ezimbini ezingaphambili ezimnyama kunye nokufikelela ngokulula. Enye into efihliweyo yobusela epokothweni ilungile kwizinto zakho ezibalulekileyo.
Izinto eziphathekayo: Yenziwe nge-splashproof & scratch oxford enganyangekiyo, umgangatho ophezulu, omelele kwaye u-eco-friendly. I-Zippers zenziwe ngokwezifiso ze-TIGERNU, zihlala ixesha elide kwaye zilula ukuyisebenzisa.
Iimpawu: Umtya wegxalaba uhlengahlengiswa ngokweemfuno zakho. I-iPad slot ifakwe kakuhle kwaye iyothusa.
Le ngxowa lukhetho olufanelekileyo kubomi bakho bemihla ngemihla, umsebenzi, umkhweli, uhambo, isikolo.
Ingxowa ye-Crossbody Bag T-L5102
Uyilo lwakudala lweTIGERNU umgangatho ophezulu wengxowa yesithunywa esenzelwe amadoda
Le ngxowa yomthunywa yenzelwe nayiphi na injongo, ilungele amadoda, abafundi, umsebenzi, ukuhamba kunye nobomi bemihla ngemihla.
• Yenziwe nge-splashproof & scratch oxford enganyangekiyo, ayomelelanga nje kuphela kodwa ikwanobuhlobo
Ubungakanani bayo yi-21 * 6 * 26cm (L * W * H), umzimba omncinci kodwa umkhulu umthamo.Igumbi elinye eliphambili elinendawo yokutshixa ithebhulethi yokutshixa ilingana ne-9.7 ″ i-iPad.Kwaye iphangalele izinto zakho zemihla ngemihla. ipokotho enye yangasemva ilungele izinto zakho ezincinci kunye nokufikelela ngokulula.
• Uyilo lobusela obuchasene nobusela, iiziphu zepokotho ezingaphambili nezingasemva zifihliwe kwaye azibonakali, zisenza izinto zakho zikhuseleke ngakumbi
• Ubude bomtya buhlengahlengiswa ngokwemfuno yakho
• Ubunzima bokukhanya, ingxowa inobunzima nje nge-0.28kg, ayizukuwonyusa umthwalo wakho xa upakishwe ngokupheleleyo
Isikhwama se-TIGERNU sling sikunika amava amahle okunxiba kunye nezinto ezininzi.Siyakwamkela ukuthenga nge-TIGERNU, awusoze uphoxeke kwiingxowa ze-TIGERNU kunye neenkonzo zazo
Iingxowa zeSling T-S8027P
I-TIGERNU ultra slim kunye nobunzima bokukhanya kobunzima bomntu obhinqileyo
Le bhegi yesifuba liqabane elifanelekileyo lokuhamba elinempawu ezininzi
Uyilo olucekeceke olunomthamo omkhulu, ubungakanani ngu-18 * 9 * 35cm, lulungele ithebhulethi ye-9.7 ″ kunye nezinye izinto zakho zemihla ngemihla.
Yenziwe nge-PU ekumgangatho ophezulu, yomelele, ihlala ixesha elide kwaye inobuhlobo
Igumbi elinye eliphambili, ipokotho enye engaphambili kunye nenye efihliweyo yangasemva, gcina zonke izinto zakho zilungelelaniswe kakuhle kwaye kulula ukufikelela kuzo.
• Ukhuseleko ngakumbi, igumbi eliphambili litshixiwe ngebhakethi, ukubonelela ngokhuseleko kwizinto zakho
• Umtya olungelelanisiweyo wegxalaba
• Ubunzima bokukhanya, bungu-0.6kg kuphela
Le ngxowa yokulingisa lukhetho olufanelekileyo kubomi bakho bemihla ngemihla, ukuhamba ngebhayisikile, ezemidlalo, ukuhamba.
• Uyilo olucekeceke olunomthamo omkhulu, ubungakanani li-19 * 9 * 33cm, lulungele ithebhulethi ye-9.7 ″ kunye nezinye izinto zakho zemihla ngemihla.
• Yenziwe ngomgangatho ophezulu wokungabinamanzi kunye nokukrwela ipholiyesta enganyangekiyo, eyomeleleyo, ehlala ixesha elide kwaye inobuhlobo
• Ubunzima bokukhanya, bungu-0.3kg kuphela
Isilingi isilwanyana T-S8027
I-Tigernu ultra slim kunye nesisindo sokukhanya somntu ophethe isilingi
• Yenziwe ngodidi oluphezulu lokuphamba kunye nokuxhathisa oxford, yomelele, ihlala ixesha elide kwaye inobuhlobo
• Ubunzima bokukhanya
Isilingi Ingxowa T-S8061
I-TIGERNU ibhegi yezemidlalo yesimbo esiqhelekileyo
Le bhegi yomnqamlezo yenzelwe ukwenza iseti yobhaka weTIGERNU T-B3351.
Izinto eziphathekayo: zenziwe nge-splashproof & scratch enganyangekiyo izinto ze-oxford, ezomeleleyo, ezichasene nokuqhekeka, ezomeleleyo.Izippers zenziwe zanelogo ye-TIGERNU, ekumgangatho ophezulu kunye nokulwa nokurusa, ubungqina bokuqhushumba, ukusetyenziswa ngokugudileyo.
Umthamo: Igumbi eliphambili elineepokotho eziyi-7 ezizodwa, ligumbi elaneleyo le-7.9 ″ i-iPad, ibhanki yamandla, umnxeba, isipaji, incwadi yamanqaku, ibhotile yamanzi njl.
Isingxobo esinexabiso sasedolophini, esifanelekileyo ebomini bakho bemihla ngemihla. Umtya wegxalaba uhlengahlengiswa kubude nakwicala lasekhohlo okanye lasekunene, kwaye yindlela ekhethekileyo kubafundi, amadoda, abafazi, ukuhamba, umsebenzi, ezemidlalo, ukuhamba ngebhayisikile.
Isilingi isilwanyana T-S8089
I-TIGERNU ibhentshi yeenjongo ezininzi
Le ngxowa yesling yinto ekhethekileyo yoyilo, inokusetyenziswa njengebhegi yesilingi okanye ubhaka ngaxeshanye.
Umthamo: Ubungakanani besikhwama sesifuba ngu-17 * 10 * 30cm (L * W * H), ilungele i-9.7 ″ i-iPad.Igumbi eliphambili linomthamo omkhulu ophethe iipokotho ezincinci ezinokulingana iincwadana zakho, ifowuni, ibhanki yamandla, isipaji, amanzi kwaye nangokunjalo. Kukho iipokotho ezingaphambili ezi-2 ezilungele iipeni zakho, amaqhosha, umnxeba, iintambo njl.Ipokotho yangasemva ye-RFID ilungile kwizinto zakho zexabiso njengekhadi lebhanki, ifowuni.
Umgangatho: Isingxobo sesifuba senziwe nge-nylon enganyangekiyo kunye nokukrwela isikhumba sokwenene, esihlala somelele kwaye si-eco-friendly, ngaxeshanye sinemfashini.Iziphu zikumgangatho ophezulu wokuqhushumba-ubungqina kwaye zilula kakhulu ukuzisebenzisa. Iibhola zenziwe ngokwezifiso zeTIGERNU, uyilo lwefashoni oluhlala ixesha elide.
Iimpawu: Le umtya igxalaba umtya adjustable kwaye zingasetyenziswa ubhaka njengoko need.It yakho kwakhona zilungelelaniswe ukuya ekhohlo okanye ekunene kuxhomekeke habit.It yakho ingasetyenziswa njenge ibhegi eyodwa ibhegi, ubhaka, isilingi ibhegi ngaphambili okanye umva.
Izibuko langaphandle le-USB libonelela ngokulula ukutshaja isixhobo sakho nangaliphi na ixesha ngaphandle kokukhupha ibhanki yamandla kunye nomngxunya wefowni ekuvumela ukuba wonwabele umculo xa uhamba ngebhayisikile okanye ubaleka okanye udlala imidlalo.